2021 Umhlahlandlela Wokuthenga ku-Faucet Bathroom
Ikhaya / Umhlahlandlela Wompompi / Ungayikhetha Kanjani ompompi Wokugeza: 2021 Umhlahlandlela Wokuthenga
2021 / 01 / 28 UkwahlukanisaUmhlahlandlela Wompompi 4711 0
Ukukhetha ompompi bendawo yokugezela kusinki yakho kungazwakala njengesinqumo esilula uze uqale ukubona ukuthi zingaki izinketho ezitholakalayo. Kukhona ukucushwa okuhlukile, imibala nokuqedela, ukuphatha izitayela, osayizi, nokuningi. Wazi kanjani ukuthi iyiphi inaliti efulethini elifanele indlu yakho yokugezela?
Kuyasiza ukuqala ngokuqonda ngakunye kokukhethwa kukho kanye nobuhle babo, ububi babo, nemikhawulo yabo. Ezinye kungenzeka zingabi inketho yokugezela kwakho nhlobo. Ake sihlukanise umehluko omkhulu phakathi kwezinhlobo ezahlukahlukene zompompi bendawo yokugezela ukunquma ukuthi iziphi ezifanelana kahle nezidingo zakho.
Ukuqonda Izinketho Zakho Zokufaka
Iningi lezinto ezingasizi ngalutho nezindawo zokugezela ziza nezimbobo zangaphambi kokumba kompompi. Ungaqaphela ukuthi ezinye izinto ezingelutho zinembobo eyodwa kuphela ngemuva kukasinki kanti ezinye zinemithathu. Labo abanezimbobo ezintathu banenani elingafani lesikhala phakathi kwezimbobo.
Bheka ukungabi nalutho kwakho noma i-countertop yakho ukubona ukuthi yikuphi ukucushwa kwembobo onakho, ngoba lokhu kuzokhawulela ukukhetha kwakho ompompi. Isibonelo, uma unembobo eyodwa kuphela, ngeke ukwazi ukusebenzisa ukufakwa kompompi abathathu ngaphandle uma wenza ngezifiso ezengeziwe.
Ngaphezu kwenani lezimbobo, bheka ukuthi zibekiwe kanjani izimbobo. Uma unezimbobo ezintathu, linganisa ibanga phakathi kwezimbobo ezimbili ezikude ngapha nangapha. Oompompi abahlukahlukene benzelwe ukwakheka kwezimbobo ezahlukene.
Ngalezi zilinganiso nemikhawulo engqondweni, ungaqhubekela phambili ngokwazi ukuthi yikuphi ukucushwa kokufakwa futhi akuyona inketho yakho njengoba sihlola lezo zinhlobo zokufaka.
Izinhlobo Zokufaka ompompi
Phakathi kompompi nezibambo, kunezindlela eziningi ezahlukahlukene ezibekiwe zompompi. Lezi yizigaba ezijwayelekile ozothola.
Amapayipi ompompi we-Chrome Bathroom Centerset
Umpompi we-centeret unompompi nezibambo ezimbili, kodwa zonke zibekwe endaweni eyodwa. Lokhu kuvame kakhulu kokuyize okuncane ngoba kuhlangene. Umpompi we-centeret uzodinga ukufakwa kwemigodi emithathu, futhi eziningi zazo ziza ngamasayizi ahlukene, ngakho-ke kuzodingeka ukhethe okulingana nebanga phakathi kwezimbobo zakho.
I-Chrome Single-Hole ompompi Abapompi Bokugeza
Ngokuvumelana negama layo, umpompi womgodi owodwa uqukethe kuphela ucezu olulodwa: umpompi. Eziningi zalezi zinto zizoba nesibambo esakhelwe ompompi, imvamisa ngaphezulu kwesiphetho.
Iningi lamapayipi ombobo owodwa lifushane, kepha kukhona ompompi bomkhumbi, abakhelwe amasinki emikhumbi ngakho-ke bade kunabompompi bendabuko. Akunandaba, uma ufaka imbobo eyodwa, lezi yizinhlobo zompompi ozodinga.
I-nickel ebhulashiwe ompompi Abanzi Bendawo Yokugeza
Umpompi osakazekile unezingxenye ezintathu ezihlukene: ompompi nezibambo ezimbili. Ngokungafani nompompi be-centeret, ompompi abasakazekile abanaso isisekelo; lezi zingxenye ezintathu zifakwe ngokwehlukana ngokungabi nalutho okuyize noma isikhala se-countertop phakathi kwazo.
Lezi ompompi ziyinketho kuphela uma unokucushwa okubanzi kwemigodi emithathu kokuyize kwakho. Ngenhlanhla, nokho, ngoba lezi zingcezu ezintathu zihlukile, asikho isidingo sokukhetha ipompo elifana nobubanzi obuqondile besakhiwo sakho: ukucatshangelwa okubalulekile kompompi abasethwe phakathi nendawo.
Oompompi Abasebenza Obondeni
I-Chrome Mount Bathroom Faucet Chrome
Oompompi abafakwe obondeni bangumkhuba okhulayo, ikakhulukazi ezindlini zokugezela zikanokusho. Ngokuvumelana negama labo, la mapompi aphakanyiselwa odongeni noma i-backsplash ngemuva kwesinki sakho kunokuba kube yize uqobo. Lokhu kukhulula isikhala esithe xaxa kuthebulethi, noma kunjalo kuthanda ukwengeza entengweni yendlu yakho yokugezela ngoba imvamisa kudinga ukuthi uplamba ukuhambisa amanye amapayipi ukuze afinyelele lapho kufakwa khona.
Izici Ezithinta Uhlobo Lokufaka Kwakho Lompompi
Wazi kanjani ukuthi iyiphi yalezi zinhlobo zokufaka isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu ongakhetha kuzo? Cabanga ngalezi zici.
Ukufakwa Kwamanje Imigodi
Buyela emuva emigodini e-pre-drilled ku-vanity yakho noma kwi-countertop yakho. Ukubuyekezwa kwendlu yangasese okungabizi kakhulu, khetha ompompi owenzelwe uhlobo lokucushwa i-countertop yakho enalo.
Unenketho yokubhola izimbobo ezingeziwe, kepha lokhu kungabiza. Khumbula ukuthi ungakhetha ompompi abanembobo eyodwa uma unezimbobo ezintathu kokuyize kwakho, kepha funa ompompi onendlela yokumboza izimbobo ezingasetshenziswanga.
Ufuna ukuthi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu sakho silingane nobukhulu beze yakho noma itafula lakho. Ngokuvamile, ize ezingenamsebenzi zisebenza kangcono ngomgodi owodwa, isethi emaphakathi, noma ompompi abekwe odongeni. Oompompi abasakazekile balinganiselwa kakhulu kokuyize okukhulu nakuma-countertops.
Oompompi abaningi baklanyelwe izindishi zamasinki zendabuko. Kodwa-ke, amasinki emikhumbi aya ngokuya ethandwa kakhulu. Uma une noma uhlela ukuba nesinki yomkhumbi, khetha ompompi bomkhumbi noma ompompi oboshelwe odongeni ophakeme ngokwanele ukufaka usinki wakho.
Isibambo Sompompi kanye Nezinketho Zokulawula Amanzi
Omunye umehluko ozowubona phakathi kompompi yindlela abaphatha ngayo ukulawulwa kwamanzi, njengenombolo yezibambo abazisebenzisayo nendlela lezo zibambo ezihamba ngayo. Lezi yizigaba okungenzeka uzithole.
Ompompi Bokugeza Abangashadile Abodwa
Oompompi abaphatha isibambo esisodwa banesibambo esisodwa esilawula kokubili ukugeleza kwamanzi kanye namazinga okushisa kwamanzi. Isibambo ngokuvamile sijikela kwesobunxele nangakwesokudla ukulawula izinga lokushisa ngenkathi sikhuphukela phezulu naphansi ukulawula ukugeleza kwamanzi.
Lezi zinhlobo zezibambo zivamile emaphepheni anomgodi owodwa kanye nakompompi bomkhumbi nakompompi abafakwe odongeni. Abantu abaningi bakuthola kulula ukuphatha kunokubamba okuhlukile amanzi ashisayo nabandayo ngoba kungaba nzima ukuthola ibhalansi elungile phakathi kwalokhu okubili.
Oompompi Ababili Abaphethe Uwoyela Ibhulashi Elisakazekile Le-Bathroom Sink Faucet
Kuma-centeret kanye nompompi abasakazekile, lindela ukuthi ompompi bakho babe nezibambo ezimbili ezihlukene. Enye ilawula ukugeleza kwamanzi abandayo kanti enye ilawula ukugeleza kwamanzi ashisayo. Ngokungafani nompompi owodwa wesibambo, lezi zibambo zijika ngendlela eyodwa: kungaba kwesobunxele nangakwesokudla noma phezulu naphezulu.
Ompompi Abasebenza Ngokuthinta
Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esisebenza ngokuthinta iyipompi evuleka ngokuthinta ebusweni bompompi. Ngamanye amagama, awudingi ukuvula isibambo esithile. Ukuthepha nje kwesandla sakho, ingalo, noma indololwane kuzokwenza kusebenze ompompi.
Lezi ompompi zisiza kakhulu ngenhloso yokuhlanzeka. Uma izandla zakho zingcolile, ngokwesibonelo, ungavula umpompi ngendololwane yakho esikhundleni sokuthinta izibambo ngezandla ezingcolile.
Ukulawulwa kwamazinga okushisa kuyahlukahluka kulezi zinhlobo zompompi. Amanye anokushisa kwangaphambi kokusetha, ngakho-ke amanzi ahlala ephuma ngezinga elifanayo. Ezinye zinesibambo esisodwa noma ezimbili ongazisebenzisa ukulawula izinga lokushisa, ngakho-ke ungavula amanzi bese uhlanza izandla zakho ngaphambi kokulungisa izinga lokushisa.
Ngokuvumelana negama labo, ompompi abangathinti lutho abadingi ukuxhumana nhlobo. Banenzwa ethola lapho izandla zakho zisondela ompompi, futhi lezo zinzwa zivula umpompi. Njengompompi abasebenza ngokuthinta, ompompi abangathinti cishe bahlala benamazinga okushisa asethwe ngaphambilini.
Izici Ezithinta Ukuphathwa Kwakho Nokulawulwa Kwamanzi
Uyikhetha kanjani indlela yokubamba nokulawula amanzi engcono yokugezela kwakho? Kunezici eziningana okufanele zithinte isinqumo sakho.
Amakhono Okuhamba Ngezandla
Ngabe ukhona ekhaya lakho noma omunye ovakashela ikhaya lakho onobunzima bokuhamba kwesandla sakhe? Bangaba nesifo samathambo, ukulimala kwemizwa, noma olunye uhlobo lokugula noma lokulimala. Uma kunjalo, ompompi abangathinti noma abathintwayo badinga amandla esandla amancane nokuxhumana ngakho-ke kuzoba lula ngabo ukuphatha.
Phakathi kwemikhuhlane, umkhuhlane kanye nobhubhane lwe-COVID-19, kunezizathu eziningi zokubheka izindlela zokwenza ikhaya lakho lingabi namagciwane. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma unezingane, njengoba izandla zazo ezincane zivame ukuthola indlela yazo yokungcola nezinye izinto ezingcolile. Ezokuphepha nezempilo, ompompi abangathintwa noma abathintwayo bazoba ukubheja kwakho okuhle kakhulu.
Uhlobo lwe-Faucet Installation
Buyela emuva ekumisweni kwakho kwepayipi kokuyize. Inani lezimbobo onalo linganciphisa izinketho zakho zezinhlobo zezibambo ozikhethayo. Uma unokulungiswa komgodi owodwa, cishe ngeke ukwazi ukukhetha ompompi abanezibambo ezimbili ngaphandle kokuthi wenze ngezifiso ezengeziwe.
Izitayela Zesibambo Sompompi
Lapho ukhetha ompompi bakho, kubalulekile ukubheka isitayela sezibambo ozifunayo, hhayi nje isibalo sezibambo. Cabanga ngalezi zinketho eziphezulu.
Izibambo ze Knob ngokuvamile ziyizibambo eziyindilinga ozijika ukulawula ukugeleza kwamanzi nokushisa kwakho. Abanye abantu bayazikhetha ngoba zivame ukubumbana kakhulu kunezibambo ze-lever. Ngokuyinhloko uzobona izinkinobho ekulungiselelweni kompompi okubamba okumbili, noma kukhona ompompi abaphatha isibambo esisodwa abanesibani esihamba kuzo zonke izinhlangothi.
Isibambo sesibindi uhlobo oluvame kakhulu lwesibambo ozozibona ompompi. Yakheke njengenduku evundlile, yize isibambo ngasinye sinesitayela saso kanye nokugoba. Njengama-knob, lezi zibambo zivame ukuvela ompompi abanezibambo ezimbili bese ujikela kwesokunxele nakwesokudla kuphela.
Uma unompompi owodwa wesibambo, leso sibambo ngokuvamile siyisibambo senjabulo. Lezi izibambo ezinde eziya phezulu naphansi kanye nakwesobunxele nangakwesokudla ukuze zikwazi ukulawula kokubili ukushisa nokugeleza kwamanzi. Zijwayele ukunamathiselwa esikhunjeni sethumbu uqobo lwaso.
Izici Ezithinta Ukukhetha Kwakho Kwezibambo
Njengoba ucabanga ngezinketho zakho zokubamba zompompi wakho omusha wokugezela, gcina lezi zinto engqondweni.
Njengokulungiswa kwesibambo okuhlukile, izinhlobo zezibambo ozikhethayo zingaxhomeka ekuhambeni kwesandla samalungu omndeni wakho. Ama-knobs, ngokwesibonelo, adinga ukubanjwa ukuze kube nzima kakhulu ukuwasebenzisela abantu abanamandla alinganiselwe esandla noma ukulawula izandla. Izinti zokuthokozisa nezindwangu zifinyeleleka kalula.
Uhlobo lokumisa isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu olukhethayo luzonciphisa ukukhetha kwakho kwezibambo. Isibonelo, uma udinga ompompi wesibambo esisodwa, lokhu kuzohlala kunesibambo senjabulo.
Qedela izinketho zamapompo okugeza
Njengokucushwa nokusetshenziswa kompompi bendawo yokugezela, ufuna futhi ukuthi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu sibukeke kahle endlini yakho yokugezela. Yilapho imibala ehlukahlukene nokuqedwa kungena khona, ngakho-ke gcina lezi zinketho engqondweni.
I-Chrome Center Faucet Faucet
I-Chrome iphakathi kokuqeda okwaziwa kakhulu ompompi bokugezela nangaphezulu. Umbala wayo ofana nowesiliva nokukhanya okucwebezelayo okuphezulu kwenza kube ukhetho oluthandwayo.
Isikhungo Sombhobho Wokugeza Esine-Pop-Up Drain Assembly
Ompompi be-Nickel bangaba nombala ofana nowesiliva noma ocishe ube mnyama, onama-undertones aphuzi. Zombili i-nickel enebhulashi, ene-satin sheen, ne-nickel epholishiwe, eyi-glossier, zivamile ezindlini zangasese zanamuhla nezesiko.
Indlu yangasese yeSinki yokugezela 4 Inch Centre Amafutha Ahlanjululwe Ngobhedu
Ngombala wayo onsundu ojulile, ocishe ube mnyama, ithusi eligcotshwe uwoyela selikhuphuke lathandwa eminyakeni yamuva. Kuvamile ezindlini zangasese ngesitayela sendabuko noma sesimanje, futhi ngokuvamile ine-satin sheen ethambile.
I-Brass ingene futhi yaphuma ekuthandweni kaningana, kepha namuhla, kuyindlela ekhulayo yamapompo okugeza. Ngokufana ne-nickel, uzothola ompompi bobhedu ababhulashiwe nabaphucuziwe.
Izikebhe Zokuphuza Izitsha Zomshini Matte Black
IMatte black iyindlela entsha yompompi futhi iba yinto ethandwa kakhulu, ikakhulukazi emakhaya esimanje. Isitayela esingenakukhanya sinesibindi futhi sesimanje ngenkathi umbala omnyama kulula ukuwufanisa cishe nanoma yiluphi uhlelo lombala.
Indlu yangasese Sink isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Engagqwali
Njengoba idume njengensimbi engagqwali isemakhishini, manje sekuyindlela evamile ompompi bendawo yokugezela. Imvamisa ibukeka ifana ne-nickel ebhulashiwe kodwa enezwi eliphansi elihlaza okwesibhakabhaka, nangokuphela okukhazimulayo kancane.
Izici Ezithinta Ukukhetha Kwakho Phakathi Kokuphela Kompompi
Yikuphi kulezi zitayela zokuqeda okukhethwa kukho okulungile kumbhobho wakho wokugezela? Cabanga ngalezi zici.
Ngokusobala, ufuna ukuthi indlu yakho yokugezela ibe nokubukeka okuhlangene, okujabulisayo. Ukuqedwa kompompi okuhlukile kuzosiza izitayela nemibala ehlukene, ngakho-ke khetha eyodwa evumelana kahle nesitayela sakho.
Okunye ukuqeda kulula ukukugcina kunabanye, futhi ngamunye unobuhle nobubi bakhe. Ukuqedwa kweGlossier kukhombisa amabala nezigxivizo zeminwe kalula ukwedlula ukwenziwa kwe-matte ne-satin, kepha futhi kulula ukuyihlanza. Linganisa izinto eziza kuqala kuwe ngenkathi ukhetha ukuphela kwakho kompompi.
Ukufeza leso sitayela sokubumbana kuyo yonke indlu yokugezela, abantu abaningi bafuna ukufanisa ompompi babo nezinye izesekeli ezisegumbini, njengesibuko sabo, izesekeli zetheyiphu nezinye izingcezu. Uma uqeda ukuqeda ompompi wakho, lokhu kuzoba lula kakhulu ukwenza lokhu.
Ukukhetha ifektha lakho lokugezela
Ngokusobala, kuningi okuya ekukhetheni ompompi bakho bokugezela olandelayo. Kuyindaba yokuqonda amamodeli ahlukahlukene nezinketho, ukunquma ukuthi iziphi ezitholakalayo ngokuya ngendawo yakho yokugezela nokuyize kwakho, nokuthola ukulingana okulungele zonke izidingo zakho nezinhloso zakho. Ukuze uthole usizo olwengeziwe nangemibono yompompi ephezulu, hlola imihlahlandlela yethu yokuthenga ompompi yokugezela eyengeziwe.
Okunconyiwe kochungechunge lwebhafu yokugezela
Edlule :: Ungakuhlanza Kanjani Ukulungiswa kweMatte Black Bathroom Olandelayo: Ungazihlanza Kanjani ompompi Abasekhishini Abamnyama
2021 / 02 / 04 13086
2021 / 02 / 03 12912
2021 / 02 / 03 9283
2021 / 01 / 28 8436
2021 / 01 / 28 10963
2021 / 01 / 27 6757